`အစကတည်းက ခင်လေးပြောပြီးသားပဲ မောင်ရာ၊ အဖေ့ဆီကိုသွားရင် ဖိုးသားလေးကို ဘယ်လိုမှ ခေါ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာ။ အခုတော့ ဘယ့်နှယ်လုပ်မလဲမောင် ဖိုးသားလေးချောင်းဆိုးတာ သုံးရက်ရှိပြီ။ အဲဒါမောင်ပေါ့လျော့တာ´
ငိုသံစွက်ရုံမက မျက်ရည်တွေပါ ပိုးပိုးပေါက်ပေါက် ကျနေပြီဖြစ်သော ဇနီးသည်၏ ပြောစကားအောက်တွင် ကျွန်တော့်၌ ပြောစရာစကား အဆင့်သင့်ရှိမနေပါ။ တကယ်ဆိုလျှင် ခင်လေးပြောသလို ကျွန်တော်ပေါ့လျော့ခဲ့သော အပိုင်းလည်းပါသည်။ ပြဿနာသည် တီဘီရောဂါဟု သံသယရှိနေခြင်းခံရသော အဖေ့အိမ်သို့ ငါးနှစ်အရွယ်ကျွန်တော့်သား ရောက်ရှိသွားခြင်းမှ အစပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တကယ်တမ်းတွင် အဖေ့အိမ်နှင့်ကျွန်တော့်အိမ်သည် စည်းရိုးတစ်ခုသာ ခြားထားသော အ၀န်းအ၀ိုင်းတစ်ခုတည်းမှသာ ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်အိမ်ထောင်ကျတော့ အဖေနှင့်အမေက အိမ်ဘေးက မြေကွက်လပ်တွင် ကျွန်တော့်ကို အိမ်ဘေးက မြေကွက်လပ်တွင် ကျွန်တော့်ကို အိမ်ဆောက်ပေးခဲ့လေသည်။ စည်းရိုးတစ်ခုခြားထားသော်လည်း အချိန်မရွေးဥဒဟို ၀င်ထွက်၍ ရနိုင်ရန် ခြံစည်းရိုးအလယ်တွင် လူသွားစရာတံခါးတစ်ပေါက်ကို အမြဲတမ်းဖွင့်ထားလေ့ရှိသည်။ ကျွန်တော်က ညီအစ်ကိုသုံးယောက်တွင် အငယ်ဆုံးသားဖြစ်သော်ငြား အိမ်ထောင်ကျသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အဖေက ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးအိမ်တစ်လုံး ဆောက်ပေးပြီး အိမ်ခွဲထားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်တော့်အစ်ကို နှစ်ယောက်မှာ တစ်ရပ်ကွက်ထဲတွင် အိမ်ထောင်ကိုယ်စီနှင့် အိမ်အသီးသီး ရှိကြသော်လည်း ကျွန်တော့်လို နီးနီးကပ်ကပ် နေကြသူတွေမဟုတ်။ မိသားစုကိုယ်စီနှင့် ညီအစ်ကိုသုံးယောက်လုံးက စီးပွားရေးပိုပိုလျှံလျှံမဟုတ်သော်ငြား စားနိုင်သောက်နိုင်သည့် အခြေအနေမှာတော့ အားလုံးရှိနေသည်။
အဖေက ဌာနတစ်ခုမှာ ရုံးအုပ်တစ်ယောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ပင်စင်ယူလို့ အေးအေးဆေးဆေးနေမည် ကြံရုံမှမရှိသေး ချောင်းတဟွတ်ဟွတ်ဆိုးကာ ခဏခဏ ဖျားတော့သည်။ အိပ်ရာထဲမှာလည်း နေသူမဟုတ်သော်လည်း တရှောင်ရှောင်နှင့် ဖြစ်လာရသည်။ အစပိုင်းတွင် ရပ်ကွက်ထိပ်ဆေးဆိုင်မှ စပ်ဆေးအချို့နှင့် သဟဇာတဖြစ်နေခဲ့သော်လည်း အဖေ့ချောင်းဆိုးရောဂါက ပျောက်သွားလှ ငါးရက်၊ တစ်ပတ်သာ။ ပြီးလျှင် ချောင်းက ပြန်ဆိုးလာပြန်သည်။ ချောင်းဆိုးပုံကြီးကလည်း သက်တောင့်သက်သာတော့မဟုတ်။ တကယ့်ကို ရင်ခေါင်းသံကြီးနှင့်။ အဖေချောင်းတစ်ခါဆိုးလျှင် ၀မ်းဗိုက်ထဲက ကလီစာတစ်ခုခု ပြုတ်ထွက်ပါလာတော့မည်ဟု ထင်ရလောက်အောင်ပင် အဖေ၏အခြေအနေမှာ ဆိုးလာခဲ့သည်။
အဖေ့ကို ကျွန်တော်တို့ သံသယ၀င်ပြီ။
အဖေတစ်ခုခုများ ဖြစ်သလား။ တစ်ခုခုဆိုတာလည်း အခြားတော့မဖြစ်နိုင်။ ချောင်းတွေ ဒီလောက်အဆက်မပြတ် ဆိုးနေပုံထောက်လျှင်…။
အတွေးများ၏ အဆုံးတွင် အစ်ကိုနှင့်တိုင်ပင်ပြီး အထူးကုဆေးခန်း မဟုတ်သော်ငြား၊ အတော်အသင့် နာမည်ရှိသော ဆေးခန်းတစ်ခု ပြေးရပြီ။ အဖေ့ကိ သွေးစစ်ကြ၊ ဆီးစစ်ကြ၊ ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြသည်။ နောက်ဆုံး ဆေးခန်းလေး၏ အဖြေက အဖေ့မှာ အဆုတ်တစ်ခြမ်း မကောင်းတော့ပါတဲ့။ တီဘီဟု သံသယရှိသည်တဲ့။ တိတိကျကျ အဖြေတစ်ခုထွက်လာသည်တော့ မဟုတ်ခဲ့။ အဲ့ဒီနောက်တွင် တီဘီရောဂါသည်တစ်ယောက်ကို ပြုစုရမည့် နည်းလမ်းများ၊ တိုက်ရမည့်ဆေးများ၊ လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းများအား မေးပြီး လောလောဆယ် အဖေ့ကို အိမ်မှာပင်ပြန်ခေါ်ထားခဲ့သည်။
ဆေးခန်းတွင် ငါးရက်ခန့်နေပြီး အိမ်ပြန်ရောက်သော နေ့မှာပင် ကျွန်တော့်သားနှင့်ပတ်သက်ပြီး အဖေ့ဆီမှ စကားစလာခဲ့သည်။
`အင်း… သူများအိမ်သွားဆော့နေတယ်ထင်တယ်´၊ `သူ့ဘကြီး လာခေါ်သွားလား မသိဘူး´ စသော ကျွန်တော့်မိန်းမ၏ မသေချာ မရေရာလှသော အဖြေများအောက်တွင် အဖေသည် တစုံတခုသော အချိန်အတိုင်းအတာထိ တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့သည်။
အဖေ့မျက်လုံးများ မှေးစင်းပြီး အိမ်ခေါင်မိုးမျက်နှာကျက်ကို ငေးစိုက်ကြည့်နေသည်က တကယ့်ကို ရီဝေေ၀။
တကယ်ဆိုလျှင် ကျွန်တော့်သားက အဖေတို့နှင့် နေလာခဲ့သည်မှာ အဖေပင်စင်ယူကာစကတည်းက ဆိုတော့ တစ်နှစ်လောက်ပင် ရှိပြီ။ ကျွန်တော်တို့လင်မယားက ရုံးလုပ်ငန်းကိုယ်စီနှင့်မို့ မနက်မိုးလင်းလျှင် ကလေး၏ ဝေယျဝစ္စများလုပ်။ လိုအပ်သည်များ စီစဉ်ကာ ဖိုးသားကို အဖေ့အိမ်မှာဥာ ထားခဲ့၇ခြင်း ဖြစ်ဥည်။ သည်တော့ ဖိုးသား၏ အကြောင်းအရာကိစ္စအတော်များများသည် အဖေတို့ အမေတို့နှင့်သာ ပိုပြီး သက်ဆိုင်နေရသလိုပင် ဖြစ်တော့သည်။
ယခုကဲ့သို့ အဖေဖြစ်သောအခါ ဖိုးသားနှင့်အဖေ မဆုံရန် ကျွန်တော်တို့ စီစဉ်ရပြီ။
အမေက ဘာမှဝင်မပြောသော်ငြား စိတ်မကောင်းသည့်ပုံတော့ ပြသည်။ `ဘာပဲပြောပြော ကလေးက အရေးကြီးတယ်။ ဖိုးသားလေးကို ဒီဘက်အိမ်မလာစေနဲ့´ ဟု ပြောရှာသည်။
`အဖေသိရင် စိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာတော့ တွေးမိတယ်။ ဒါပေမယ့် မတတ်နိုင်ဘူးမောင်။ အဖေ့နားကို သွားဖို့ဆိုတာ လူကြီးတွေတောင် စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စလေ။ သားလေးကိုတော့ အဖေ့နားကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ လွှတ်လို့မဖြစ်ဘူး´
အတ္တစကားမှန်း သိသော်လည်း မိခင်တစ်ယောက်၏ မေတ္တာကို လှစ်ဟလာသည့်စကားမို့ ကျွန်တော်လက်မခံလို့ မရ ဖြစ်ရသည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သည်လည်း သားနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုတစ်ခု ဖြစ်ရသည်က အမှန်ပင်။ နောက်ဆုံး အလွယ်ကူဆုံးနည်းကိုသာ ကျွန်တော်တို့ သုံးလိုက်ကြသည်။ ထိုနည်းမှာ ကျွန်တော်တို့အိမ်နှင့် အဖေတို့အိမ်ကို ခြားထားသော တံခါးကို သော့ခတ်လိုက်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနည်းသည် ငါးနှစ်အရွယ် ကျွန်တော့်သားအား အဖေ့အိမ်ဘက် မရောက်ရန် ထိန်းသိမ်းဖို့ လုံလောက်သောနည်းဖြစ်နေသည်။ ကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက် အဖေ့အိမ်ဘက်လာလျှင် ဖိုးသားသည် ခြံထဲတွင် ရှိနေသည်ဖြစ်စေ၊ အိမ်ပေါ်တွင်ရှိနေသည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော်တို့က တံခါးကို သော့ခတ်ပြီး ဖွင့်ပြီးလျှင် သေသေချာချာ ပြန်ပိတ်စသော နည်းဖြင့်သာ အဖေနှင့်ဖိုးသားအား မတွေ့ဖြစ်ရန် ကျွန်တော်တို့ စည်းထားခဲ့ကြသည်။ သို့သော်… ခြံနှစ်ခြံကို ခြားထားသော တံခါးလေးမှ သော့ခလောက်အား အဖေတစ်နည်းနည်းနှင့်များ မြင်သွားမလားဟု ကျွန်တော်စိုးရိမ်မိသည်ကတော့ အခါခါပင်ဖြစ်သည်။
အဖေရိပ်မိသည် မရိပ်မိသည် မသေချာသော်လည်း ခြံစည်းရိုးတံခါးသော့ခတ်ထားသော နည်းသည် အဖေနှင့်ဖိုးသားကို ခြားထားနိုင်သည့် ကန့်လန့်ကာကောင်းကောင်း တစ်ချပ်တော့ ဖြစ်နေခဲ့သည်။ အဖေ့ရောဂါသေချာတိကျစေရန် မြို့ထဲက အထူးကုဆေးခန်းကြီးတစ်ခုတွင် ဆေးစစ်ချက်များကို အသေချာပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်ပေမယ့် အဖြေတော့ ထွက်မလာသေး။ တစ်နေ့တွင် အဖေ၏ မိတ်ဆွေတစ်ယောက် အဖေ့ထံသို့ လာပြီး အပြန် ကျွန်တော့အိမ်ဘက်ကို ၀င်ချင်သော သူ့ဆန္ဒကြောင့် ခြံစည်းရိုး၏ တံခါးမှ ဧည့်သည်ကို ကျွန်တော်သော့ဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ ထိုအခိုက်အတန့်လေးအတွင်းမှာပင် ကျွန်တော့်သားသည် ဖွင့်ထားသော တံခါးပေါက်မှဝင်ကာ အဖေ့ဆီ ရောက်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဖေအိပ်နေသော အိပ်ရာဘေးသို့ ဖိုးသားရောက်သွားသည်မှာ ဘယ်၍ ဘယ်မျှ ကြာသွားသည်မသိသော်လည်း ကျွန်တော်တို့၏ စိုးရိမ်မှငသည် အတိုင်းထက်အလွန် ဖြစ်သွားပြီ။ အားလုံးထဲမှာ အဆိုးဆုံးက ကျွန်တော့်မိန်းမပင်ဖြစ်သည်။ အမှန်တွင် အဖေ့နားသို့ ဖိုးသားရောက်သွားသည်ကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေသော အဖေက သိပင်မသိလိုက်။ သို့သော် တိုက်ဆိုင်စွာပင် အဖေ့အိမ်မှပြန်လာပြီးနောက်နေ့တွင် ကျွန်တော့်သား အပြင်းဖျားလေသည်။ အဖျားက သိပ်မကြာဘဲ ကျသွားသော်လည်း ချောင်းဆိုးမှာ လုံးဝမကျတော့။ သားအတွက် ကျွန်တော့်မိန်းမ၏အပူမီးသည် ကျွန်တော့်ထံသို့ပါ ကူးစက်ရပြီ။ ကျွန်တော့်မိန်းမပြောသလို တာဝန်ရှိသူက ကျွန်တော်များလားလို့လည်း တွေးရပြီ။ အမေသည်လည်း ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြီး စိတ်မချမ်းသာနိုင်တော့။ မတွေးမကောင်း တွေးမကောင်း အတွေးတို့ဖြင့်သာ ကျွန်တော့်အာရုံမျာ ရစ်ဝဲနေတော့သည်။
အဖေက အသက်ကြီးပြီ။ ဒီရောဂါနဲ့ လူ့လောကက ထွက်သွားရင်လည်း ကိစ္စမရှိတော့။ ငါးနှစ်အရွယ် ကျွန်တော့်သားလေးသာ။ ဘုရား… ဘုရား။
အိမ်မပျော်၍ တွေးသောအတွေးတို့သည် အိပ်စက်ခြင်းကို ပို၍ ဝေးစေခဲ့ပြီ။ ကျွန်တော့်မိန်းမသည်လည်း သားလေး၏ ဟိုမှာဘက်မှာ ငုတ်တုတ်။ နှုတ်ခမ်းလေးချွန်၊ ရင်လေးမောက်ကာ လူးလိမ့်နေအောင် ချောင်းဆိုးနေရသော သားလေးကလည်း ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကြားမှာ တကယ့်ကို သနားစဖွယ်အတိ။
`ဒါတွေဟာ ခြံတံခါးဖွင့်ပြီး ပြန်မပိတ်မိတဲ့ ဖေဖေ့အပြစ်တွေပါ။ ဖေဖေ့ကို ခွင့်လွှတ်ပါ သားရယ်´
သားကိုကြည့်ရင်း မျက်ရည်မကျစေရန် ကျွန်တော် ထိန်းသိမ်းနေရသည်။ မနက်မိုးလင်းလျှင် တစ်စုံတစ်ခုစီစဉ်ရမည်။ မြို့နယ်ဆေးခန်းနှင့်တော့ မဖြစ်တော့။ မြို့ထဲက အထူးကုဆေးခန်းတစ်ခုမှာ သားလေးကို သွားပြမှ ဖြစ်တော့မည်။
`တီဘီရောဂါဆိုရင်တောင် ဆေးပတ်လည်အောင် သောက်ရင်ပျောက်တယ်´
လမ်းထဲမှ လူတစ်ယောက် ညနေကပြောသွားသော စကားကို ပြန်ကြားယောင်တော့ အတော်လေးအားတက်သွားသည်။ ဟုတ်သည်။ မနက်ဖြန် မြို့ထဲက အထူးကုဆေးခန်းတစ်ခုကို သွားရမည်။ မရှိ၊ ရှိတာလေးတွေ ထုခွဲရောင်းချပြီး သားလေးရဲ့အသက်ကို ဆက်မှဖြစ်မည်။ ကြည့်စမ်းပါဦး။ သူ့ခမျာ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် ချောင်းဆိုးနေရရှာတာ လူးလိမ့်နေတာပဲ။ အဲဒါ ဖေဖေ့ကြောင့်ပါသားရယ်။ ဖေဖေ့ရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့် သားမှာ ဝေဒနာတွေ တစ်ပြုံတစ်သီကြီး ခံစားနေရပြီ။ သားကိုကြည့်ရင်း အတွေးမျိုးစုံတို့ဖြင့် ကျွန်တော့်ရင်မှာ မွန်းကျပ်ရပြန်ပါသည်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပင် သားလေးကို ကွန်ပျူတာ ဓာတ်မှန်ရိုက်၊ သွေးစစ်၊ ဆေးစစ်ကြည့်သောနေ့မှာပင် အဖေ့အတွက် ဆေးစစ်ချက်အဖြေက ထွက်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်သားအတွက် ဆေးစစ်ချက်က မရသေး။ ဆေးခန်းမှာ သားအတွက် လုပ်စရာကိစ္စ အပုံအပင်နှင့် ဖြစ်နေသော ကျွန်တေ်ာသည် တိတိကျကျ ၀န်ခံရလျှင် အဖေ့ရောဂါနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆရာဝန်ကြီးနှင့် ကျွန်တော့်အစ်ကိုတို့၏ ဆွေးနွေးစကားများကို ကျွန်တော်မသိလိုက်ပါ။ သားကိစ္စနှင့် ထူပူနေသော ကျွန်တော်သည် အဖေ့အတွက် မျှော်လင့်မှုတစ်ခုကိုလည်း ခေါင်းထဲထည့်မထားဖြစ်ခဲ့ပါ။
အပြန်အငှားကားပေါ်ရောက်မှ အဖေ့ရောဂါဖိုင်တွဲများ ပေါင်ပေါ်တင်ကာ ကားရှေ့ခန်းတွင် ငူငူငိုင်ငိုင်နှင့်ထိုင်နေသော အစ်ကိုကြီးကို အဖေ့ရောဂါနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးမိသည်။
`အဖေ့ရဲ့ တီဘီရောဂါအခြေအနေ အတော်ဆိုးနေပြီလား အစ်ကိုကြီး´
ကျွန်တော်က ကားနောက်ခန်းမှ လှမ်းမေးတော့ ကျွန်တော့်ဘေးမှ ကျွန်တော့်မိန်းမကလည်း ဖိုးသားကို ပေါင်ပေါ်တင်ထားရင်းမှ စိတ်ဝင်စားဟန် နားထောင်နေသည်။ ဖိုးသားက အရင်နေ့လောက် ချောင်းမဆိုးတော့သော်လည်း `အဟွတ်ဟွတ်´နှင့် ချောင်းဆိုးမျှင်တော့ မပြတ်နိုင်သေး။
`အဖေ့ကို ငါတို့ဘက်က ဆေးခန်းက တီဘီရောဂါလို့ သံသယရှိပြီး သတ်မှတ်ခဲ့တာ။ တကယ်တော့ အဖေ့ရောဂါက တီဘီရောဂါမဟုတ်ပါဘူး။ တီဘီရောဂါထက် အများကြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါပ´
ကျွန်တော့်နှုတ်မှ `ဗျာ´ဟု ထွက်သွားသော်လည်း ကျွန်တော့်အတွေးတို့သည် အဝေးကြီးသို့ ပြေးထွက်သွားပြီ။ အဖေဖြစ်တာ တီဘီမဟုတ်ဘူးတဲ့။ အဖေဖြစ်တဲ့ ရောဂါက ကင်ဆာတဲ့။ ဒါဆို ကျွန်တော့်သားအတွက် တီဘီနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်စရာ မရှိတော့ဘူးပေါ့။ ကျွန်တော့်သား ချောင်းဆိုးခဲ့တာတွေက ရိုးရိုးပဲ ဖြစ်နေတာပေါ့။ အဖေ့ဆီက ကူးတယ်ဆိုတာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။ ကျွန်တော့်ဇနီး၏ ပေါင်ပေါ်တွင် နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်နေသော ကျွန်တော့်သားအား ကျွန်တော်စိုက်ကြည့်လိုက်သည်။ သနားစရာကောင်းသော ကျွန်တော့်သားလေသည် တီဘီရောဂါဆိုးကြီးကို ဘယ်လိုနည်းနှင့်မျှ မကြုံရနိုင်တော့ပါ။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေ ပြုံးနေမှာလား။ သေတော့မသေချာ…။ သို့သော်…. တဒင်္ဂအတွင်း၌ ကျွန်တော့်အာရုံတွေ ကျွန်တော့်သားမှ လွဲ၍ ဘာမှ ရှိမနေခဲ့တော့တာက သေချာနေသည်။
နောက်တစ်နေ့မနက် စောစောတွင် ကျွန်တော့်ကို အဖေက ခေါ်နေတယ်ဟုဆိုလာတော့ အဖေ့အနားကို ကျွန်တော်သွားလိုက်သည်။ ကျွန်တော်နှင့်အတူ နေကောင်းစပြုလာပြီဖြစ်သော ကျွန်တော့်သားကလည်း ပါလာသည်။ အဖေ့ဆီသွားလျှင် ဖိုးသားကို အရင်လို ချန်ထားပစ်စရာ မလိုတော့။ ကျွန်တော်တို့ သားအဖကို မြင်တော့ ခုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်အနေအထားဖြင့် အဖေက စိုက်ကြည့်နေသည်။
အဖေပြောလာသော စကားကို ကျွန်တော် နားမလည်နိုင်ဘဲ `ဗျာ´ ဟု သံယောင်လိုက်မိသည်။ အဖေ့အနားတွင်တော့ ကျွန်တော်တို့ သားအဖမှလွဲ၍ ဘယ်သူမှ ရှိမနေခဲ့။
`ကောင်းကင်ဆိုတာ ဒီလိုပဲ ဖြစ်နေရမှာပေါ့´
`ကျွန်တော် နားမလည်ဘူး အဖေ´
`အဖေအခုဖြစ်တဲ့ ရောဂါကို သိပြီးပါပြီ ငါ့သားရာ။ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေက အဖေ့ရောဂါဟာ တီဘီလား ဆိုးတာကိုလည်း အဖေကိုယ်တိုင် သံသယ၀င်ခဲ့တာပဲ။ ဖိုးသားလေးကို အဖေနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် မရှိစေချင်ခဲ့တာကိုလည်း အဖေရိပ်မိတာပဲ´
`အဖေ… အဖေ့ကို ဘယ်သူပြောလိုက်လဲ´
`မင်းအစ်ကိုကြီးကို အပြစ်မတင်နဲ့ ငါ့သား။ အဖေကိုယ်တိုင် မေးလိုက်တာ။ အဖေကျေနပ်တယ် ငါ့သားရေ…။ မိဘဆိုတာ သားသမီးအပေါ် အရိပ်မိုးပေးရမယ့် စောင့်ရှောက်ပေးရမယ့် ကောင်းကင်တစ်ခုပဲ။ ဖိုးသားလေးအတွက် သားတို့ကာကွယ်ပေးတာ အဖေကျေနပ်တယ်။ ´
အဖေသည် တစ်စုံတစ်ခုကို ပြောချင်ဟန်ဖြင့် အားယူနေသည်။ ကျွန်တော်သည်လည်း တစ်စုံတစ်ခုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် တွေးကြောက်မှုဖြင့် ချွေးပြန်နေသည်။ မနေ့က။ အဖေ့ရောဂါ တီဘီမဟုတ်တော့မှန်းသိလိုက်တော့ ဖိုးသားအတွက် စိတ်အေးရမှုများဖြင့် ကျွန်တော်ကျေနပ်ခဲ့သည်ပဲ။ အဖေ့ရောဂါအတိမ်အနက်သည် ဖိုးသားအတွက် စိတ်အေးသွားရခြင်းအောက်တွင် စုန်းစုန်းမြုပ်ခဲ့သည်။
ပြုံးယောင်သန်းနေသော အဖေ့နှုတ်ခမ်းမှ ပွင့်အန်လာမည့် စကားများအား စိုးရိမ်ကြီးစွာဖြင့် ကျွန်တော်နားစွင့်နေမိသည်။
`စကားစပ်လို့ အဖေတစ်ခုပြောပြမယ်။ သားငယ်ငယ်တုန်းက အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပေါ့။ သားက ညီအစ်ကိုသုံးယောက်ထဲမှာ ငယ်ငယ်ကတည်းက အသားဖြူဖြူ ၀၀ကစ်ကစ်နဲ့ ချစ်စရာအကောင်းဆုံးပဲ။ သားနှစ်နှစ်သားအရွယ်မှာ အဖေ့ရဲ့အဖေ၊ သားရဲ့အဘိုးအိမ်ကို လာလည်တော့ သားကို သားအဘိုးကောက်ချီလိုက်မှာ အဖေစိုးရိမ်လိုက်တာ သားရယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲ့ဒီအချိန် သားရဲ့အဘိုး တောသားကြီးရဲ့ လက်မှာ ၀ဲတွေပေါက်နေတာကိုး။ အဖေဖြင့် သားအဘိုးလက်က ၀ဲတွေ သားကိုကူးမှာ ကြောက်လိုက်တာ။ ဒါပေမယ့် သားရဲ့ အဘိုးက သားကို မချီခဲ့ပါဘူး။ ကောင်းကင်ဆိုတာ အဲဒါပဲသား။ အခုလည်း ဖိုးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီး သားတို့ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာ ကယောင်ချောက်ချားဖြစ်နေကြတာ အဖေ့ကို ဘယ်သူမှ မပြောလည်း အဖေသိပါတယ်။ ငါ့သားက ဖိုးသားလေးရဲ့ အဖေဖြစ်တာ ဘာကြာသေးလို့လဲ။ အဖေက သားရဲ့အဖေဖြစ်တာ ကြာခဲ့ပြီပဲဥစ္စာ။ အဖေမသိဘဲ နေမလား။ ဒါကြောင့် တီဘီမဟုတ်ဘဲ အခုလို ရောဂါဆိုတာ သိလိုက်ရတော့ အဖေကျေနပ်တယ်လို့ ပြောတာပေါ့´
စကားရှည်ကြီးကို ပြောပြီးသောအခါ တာဝေးအပြေးသမား ပန်းဝင်သွားသည့်နှယ် မျက်စိစုံမှိတ်ကာ အဖေ မောဟိုက်သွားခဲ့သည်။ တီဘီရောဂါအစား ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်လိုက်ရတာကိုတောင် အဖေကျေနပ်သတဲ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်တွေက ဖိုးသားနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့၏ အဆင်ခြင်မဲ့ သံသယမျက်ဝန်းတွေအောက်မှာ အဖေ ဘယ်လောက်များ နေရခက်ခဲ့မှာပါလိမ့်။ အဖေဘယ်လောက်များ သိမ်ငယ်ခဲ့ရမှာပါလိမ့်။ အသက်တစ်ခု ရှင်သန်ဖို့ အတွက် အဖေဘယ်လောက် ပင်ပန်းခဲ့ရမှာပါလိမ့်။
အဖေ့လက်ကို ကိုင်ကာ စကားတွေပြောချင်နေခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော့်နှုတ်က ဘာတစ်ခွန်းမှ ထွက်မလာခဲ့ပါ။ အဖေပြောသလိုဆိုရင် ကျွန်တော့်အတွက် အဖေက ကောင်းကင်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သလို ဖိုးသားလေးအတွက်လည်း ကျွန်တော်က ကောင်းကင်တစ်ခုပေါ့။ အဖေအုပ်မိုးခဲ့တဲ့ အဖေ့ရဲ့ ကောင်းကင်ကြီးအောက်က ကျွန်တော်ကလည်း ကောင်းကင်တစ်ခုပေါ့အဖေ။ နောက်ထပ် ကောင်းကင်လေးတစ်ခုရဲ့ အနာဂတ်အတွက် အသက်ရှင်ရဦးမယ့် အတ္တတွေနဲ့ ခြုံလွှမ်းထားတဲ့ ကောင်းကင်တစ်ခုပဲပေါ့ အဖေရယ်…။
`အဖေကျေနပ်လိုက်တာ သားရယ်´ ဆိုသော စကားက ကျွန်တော့်အာရုံကို ပြန်ကပ်လာသည်။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းအိမ်ထဲ အလိုလို ရောက်လာသော မျက်ရည်ဥတို့ကို အဖေမမြင်စေရန်အတွက် အဖေ့ခုတင်ဘေးမှ ကျွန်တော်ထ၍ မတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်။ ပြတင်းပေါက်ဆီမှ အမှတ်မထင် ကောင်းကင်ပြာကို မော့ကြည့်မိတော့ မိုးသားတွေ မည်းမှောင်နေတဲ့ ကောင်းကင်ကြီးဟာ မကြာမီ ပြိုကျလာတော့မယ့် အတိုင်းပါလား။
(ကလျာမဂ္ဂဇင်း၊ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၀)
မိုးကောင်းကင် ကြီးကတော့ တစ်ခုတည်း
”ဟေ့…သူငယ်ချင်း ဒီတစ်ပတ် မင်း အွန်လိုင်းက ဖုန်းခေါ်တာ နောက်ကျနေပြီ။ ဒီမှာ ည ၇ နာရီ တောင်ကျော်ပြီ”
”ငါ…. Pfingo ဖွင့်တာ လိုင်းမကောင်းလို့ပါကွာ။ အခု မြန်မာပြည်မှာ ညနေ ငါးနာရီ ခွဲပဲ ရှိသေးတယ်။ ဒါနဲ့ မင်း ငါ့ အသံကို ကြားလား….။ ငါ့ အသံကြားလားလို့ မေးတာ”
”အေး….ကြားတယ်။ တိုးတိုး ပြောပါကွ။ ငါဒီဘက်က နားကွဲတော့မယ်…အေ့”
”ဟမ်…ဟေ့ကောင် …မင်း မူးနေတာလား။ မင်းအသံကြီးက”
”ဒီနေ့ ငါတို့ စင်ကာပူမှာ အလုပ်ပိတ်ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ ဆိုတော့ မြန်မာသူငယ်ချင်းတွေ ဆုံကြတယ်လေကွာ။ နည်းနည်းပါးပါး ဒီနေ့ ငါပြုစုလိုက် ရတာလေ။ ပြီးတော့ မင်းကို ပြောစရာရှိတယ် ကိုမင်း”
”မပြောသေးဘူးကွာ…ပြီးမှ ပြောမယ်။ ငါအခု နည်းနည်းညစ် နေလို့ကွာ”
”ညစ်ပြန်ပြီလားကွာ။ ဘာလဲ မင်းချစ်ချစ် ချယ်ချယ်နဲ့ အဆင်မပြေ ပြန်ဘူးလား”
”မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ ငါ့ချစ်ချစ် နဲ့က Peace ပဲ ဘာမှမဖြစ်ဘူး”
”ဒါဆို မင်းက ဘာဖြစ်တာတုံး ထွန်းကြီးရဲ့”
”နောက်မှ ပြောမယ်ဆိုကွာ။ မင်းကလည်း ဂျာနယ်လစ်ပီပီ အမေးအမြန်း ထူတယ်။ ဒါနဲ့ ဟိုကောင်ရော အဆင်ပြေလား”
”ဟိုကောင်လေကွာ….ပြောင်ကြီး။ ငါတို့ တက္ကသိုလ် တက်တုန်းက တစ်အုပ်လုံးမှာ စာအညံ့ဆုံး၊ အခု ဆယ်တန်းတွေ ကျူရှင်ပြစား နေတယ်ဆိုတဲ့ ကောင်လေ”
”သြော်…အေး။ ဒီကောင် M.Sc ပြီးကတည်းက Ph.D ဆက်မတက်ဘဲ စာသင်နေတာ၊ စားလောက်၊ သောက်လောက်ရုံ တော့ရတယ် ကြားတယ်။ ငါနဲ့လည်း မတွေ့ဖြစ်ဘူး”
”ဟာကွာ…မင်းတို့ကလည်း ရန်ကုန်မှာ ရှိနေကြတာချင်း အတူတူ ဘာလို့ မတွေ့ကြရတာလဲ”
”ဟ…ထွန်းကြီးရ၊ ခေတ်ရဲ့ ဘယ်ရေသေရက်မှာ မင်းအိပ်ပျော် သွားတာတုံး။ ဒီကကောင်တွေ ဘာလုပ်နေကြတယ် ဆိုတာ မင်းမသိဘူးလား။ လူတစ်ယောက်မှာ ရှိတာ က လက်နှစ်ဖက်၊ လုပ်ရတဲ့ အလုပ်တွေက များလွန်းလို့ လက်တွေ အများကြီးရှိတဲ့ ကာလီမန် မယ်တော်တောင် ပင့်ပြီး လုပ်ချင်သေးတယ်။ ဒါတောင် တစ်ယောက်တည်း ဟိုဘက်နည်းနည်း တိုးပါဦး ဆိုသလို ဖြစ်နေတာ မင်းမသိဘူးလား”
”မင်းပဲပြောတော့….ဒါနဲ့ ဟိုကောင် ဂုတ်တိုမရော … ငါ သတင်း မကြားမိပြန်ဘူး”
”ဂုတ်တိုမလည်း….သူ့ အလှပြင်ဆိုင် လုပ်ငန်းက အဆင် ပြေတယ်လို့ သတင်းကြားပါတယ်”
”သူလည်း လူပုံနဲ့ လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်ကတော်တော်လေး သဟဇာတ ဖြစ်နေသလားလို့ တွေးမိသွားလို့ပါ။ ကျောင်းတုန်းက မင်းသိတဲ့အတိုင်းလေ။ ငါတို့အဖွဲ့က မိန်း ကလေးတွေ အားလုံးထဲမှာ ရုပ်ကလည်း အဆိုးဆုံး၊ ပြီးတော့ လူက ပုတုကွတနဲ့မို့ ဂုတ်တိုလို့ ငါတို့ နာမည်ပေး ထားတာပဲကြည့်။ သူက အခု အလှပြင်ဆိုင် ဖွင့်ပြီး အောင် မြင်နေတယ် ဆိုတော့ ငါရယ်ချင်တာပေါ့ကွ”
”ဒါနဲ့ စင်ကာပူက မင်းသတင်း လည်း ပြောဦးလေ”
”လိုင်းကျသွားလို့ ပြန်ခေါ်လိုက်တာ သူငယ်ချင်း… ငါတို့ပြောတာ ဘယ်ရောက် သွားပြီလဲ။ သြော် …ဟေ့ကောင် မင်းဟိုကောင် ကိုထူးကို မှတ်မိသေးတယ် မို့လား။ ပြေတီဦးလို သွားတက်ကလေး ပါလို့ သူ့သွားတက်ကလေးမှာ စိန်မြှုပ်ထားတဲ့ ကောင်လေ။ အေး…အဲ့ဒီကောင် အခု မိန်းမယူတော့မလို့”
”ဟမ်…ဟား ဟား … ကိုထူးက မိန်းမယူမလို့ ဟုတ်လား”
”အေးလေကွာ…ငါတို့ အသက်တွေလည်း ၃ဝ ပြည့်နေပြီပဲ။ ဒီကောင် မိန်းမယူတာ ဘာဆန်းလဲ”
”ဟုတ်တော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မင်းသိတဲ့ အတိုင်း ဒီကောင်က ငါတို့သူငယ်ချင်း ယောက်ျားလေးတွေ အုပ်စုထဲမှာ ရုပ်ကလေး ကတော့ လှပါရဲ့။ အမြဲတမ်း နွဲ့နေလို့ ငါက ဒီကောင်ကို ယောက်ျား ယူမယ်ထင်တာ”
”အေး….ဟုတ်တယ် ဟေ့ကောင်ရေ သန်သန်မာမာ ကောင်တွေသာ လူပျိုကြီးဖြစ်ဖို့ အရိပ်အယောင် မြင်နေရတာ။ သြော် …သန်သန်မာမာဆိုလို့ ဟိုကောင် ညိုကြီး အကြောင်းကို အရင် အပတ် တွေကတည်းက မင်းကို ပြောမလို့ဟာ မေ့မေ့နေတာ”
”သြော် …ညိုကြီးလား.. ဒီကောင်က ဘာဖြစ်လို့တုံး”
”ဒီကောင်က အခုပွဲစား လုပ်နေတယ်ကွ…အိမ်ပွဲစား၊ ခြံပွဲ စား၊ နောက်…ကားပွဲစား။ ပွဲစား ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်က ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း အားလုံးကို လုပ်နေတာ”
”ဟား ဟား ဟား”
”သြော်….ညိုကြီးလို စကားပြောရင် နှစ်လုံးမကွဲ လူက အူကြောင်ကြောင် ရှုတည်တည် မျက်နှာပေးနဲ့ ကောင်က ပွဲစား လုပ်နေတယ်ဆိုလို့။ မင်းတို့ အားလုံးလည်း ဟုတ်နေတာပဲနော်”
”အားလုံးက ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံ၊ ရှိနေတဲ့ ကာရိုက်တာ၊ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေ အားလုံးက သဟဇာတ ဖြစ်မနေကြတာ ကိုပြောတာ။ ဟိုတုန်းကဆို ဒီကောင်တွေ ဒီလို ဖြစ် လာလိမ့်မယ်လို့ ကျိန်ပြောရင် တောင် ဘယ်သူ ယုံမှာတဲ့တုံး…”
”အေးလေ…နောက်ထပ် ရှိသေးတာတွေမှ အများကြီး …ငယ်ငယ်တုန်းက မိန်းကလေး ဆိုရင် စေ့စေ့တောင် မကြည့်ရဲဘဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြော လိုက်တာနဲ့ မျက်နှာကြီး တစ်ခုလုံး နီရဲလာတဲ့ ပြေကြီးဆိုတဲ့ အကောင်လေ။ မင်းသိတဲ့အတိုင်း အခုတော့ ရုပ်ရှင်မင်းသား ဖြစ်ပြီး ချစ်ခန်း ကြိုက်ခန်းတွေ ရိုက်ရင်း မင်းသမီး တွေကို အကြိမ်များစွာ ရည်းစားစကား ပြောနေရလေရဲ့”
”အေးကွ…သနားစရာ.. ဒီကောင်လည်း ဝဋ်ဒုက္ခ တစ်မျိုးကြောင့် ရုပ်ရှင်မင်းသား ဖြစ်ရတယ် ထင်ပါရဲ့။ ဒါနဲ့မင်းတို့ အားလုံး မြန်မာပြည်မှာ အဆင်ပြေကြရဲ့လား”
”သြော်…ပြောပြီးပြီပဲ သာသာယာယာ ပါပဲဆို။ စားရင်း သောက်ရင်း၊ သွားရင်းလာရင်းပေါ့။ ဝုန်းခနဲထပြီး ချမ်းသာစရာကတော့ စိတ်ကူးယဉ် ချိန်တောင် မရှိလို့၊ နောက်မှ အေးအေးဆေးဆေး ယဉ်ကြည့်ရဦးမယ်။ ငါတို့က ဒီမှာ ပြေးလွှားနေရတာ ယားရင်တောင်ကုတ် အားတာ မဟုတ်ဘူး”
”မင်းပဲ ပြောတော့ မြန်မာပြည်သားရေ”
”အေးလေ…ငါပြောတာ မဟုတ်လို့လား။ ဒီမှာငါတို့ အားလုံး မင်းသိတဲ့ အတိုင်းလေ။ လူ့ဘဝကြီး ထဲကို ထမင်းစားဖို့ ပျော်ပျော်ကြီး ရောက်လာကြတာလေ ဟား ဟား။ ဒါနဲ့ မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်း တွေ အကြောင်းကတော့ စုံသလောက် ဖြစ်သွားပြီ။ စင်ကာပူက မင်းအကြောင်း လေးတွေလည်း ပြောဦးလေ။ ဟေ့ကောင် ထွန်းကြီး ငါပြောတာ ကြားလား”
”လိုင်းကျသွားလို့ သူငယ်ချင်း ရေ ပြန်ခေါ်လိုက်တာ…ဒါနဲ့မင်း ရဲ့နောက်က ကွိစိ၊ ကွစ အသံတွေ က ဘာတွေတုံး”
”ဘာတွေ ရှိရမှာတုံး… ငါ နဲ့မင်းနဲ့ ဖုန်းပြောရင်း လမ်းလျှောက် လာတာ ငါနေတဲ့ အဆောင်ကို ရောက်နေပြီလေ။ မင်းကြားတဲ့ ကွိစိ၊ ကွစ ဆိုတာက အင်ဒိုနီးရှားတွေ ပြောနေကြတဲ့ အသံကွ”
”မင်းပြောတဲ့ မင်းနဲ့တစ်ခန်း တည်းနေရတဲ့ ကောင်တွေ ဆိုတာလား။ ပြောစမ်းပါဦး အဲ့ဒီ အကောင်တွေ အကြောင်း”
”အေးကွ..ငါ့ကုတင်ဘေးက ဘင်္ဂလားသား အကြောင်း မင်းကို ငါပြောပြီးပြီ မို့လား။ ဟေ့ကောင် ရေ…အင်ဒိုက ပြောရင်း မျက်ရည်တွေ ဘာတွေ ကျလို့ကွ…ခဏနေ ဦး။ ငါ စပ်စုကြည့် လိုက်ဦးမယ်။ မင်း ဖုန်းကိုင်ထားဦး”
”အေး…မကြာစေနဲ့ လိုင်းကျသွားရင် ခေါ်ရခက်တယ်”
”ဒီလိုဟေ့ကောင်ရေ…အင်ဒိုသားက ဘာလို့ ငိုနေသလဲဆိုရင် အင်ဒိုက သူ့မိသားစုဝင် တစ်ယောက် ဆုံးလို့တဲ့။ ဘယ်သူလဲတော့ ငါလည်း မသိဘူး”
”ဟင်..မင်းကလည်း။ မင်းနဲ့ တစ်ခန်းတည်း နေပြီး အရင်ကတည်းက သူ့မိသားစု အကြောင်း မင်းမေးမထား ဖြစ်ဘူးလား”
”ဟ…ဒါမြန်မာနိုင်ငံ မဟုတ်ဘူး ဂျာနယ်လစ်ရဲ့။ တချို့ ကိစ္စတွေက စပ်စုလို့ ကောင်းတာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကိုယ်တိုင်က လည်း စပ်စုတာကို ကြိုက်ပုံမရဘူး”
”အဲဒါဆို….မင်းရဲ့ အင်ဒိုလေးက သူ့နိုင်ငံ ပြန်ဦးမှာပေါ့”
”ဘယ်ပြန်နိုင်မလဲကွာ..သူ ရတဲ့ လစာက စင်ကာပူဒေါ်လာ တစ်ထောင်တောင်ပြည့်တာမှ မဟုတ်တာ။ သူ့ပြည်ကို မပြန်နိုင် လို့ ကောင်းကောင်းကြီး ပုလဲခနေတာပေါ့။ ဒါနဲ့ ငါ့မိဘတွေရော နေကောင်းကြတယ် သတင်းကြားလား သူငယ်ချင်း”
”မင်းမိဘတွေက ကျန်းမာပါတယ်ကွာ။ ငါလည်း အလုပ်တွေနဲ့မို့ မရောက်ပေမယ့် ဖုန်းတော့ ခဏခဏ ဆက်ဖြစ်ပါတယ်”
”အေးကွာ…ငါပြန်မရောက်ခင် မင်းလည်း ငါ့အိမ်ဘက်ကို သွားပေးပါဦး။ ငါ ပြန်မရောက်ခင် ဆိုလို့ ငါ့ အကြောင်းတွေတောင် မင်းကို ပြောဖို့ မေ့နေတယ်”
”အေးလေ။ မင်းပဲ ပြီးမှပြောမယ်ဆိုလို့ ငါစောင့်နေတာ။ ပြီး တော့ မင်းဒီနေ့ ဘာကြောင့် အရက်သောက်ရတာပဲ။ ဟေ့ကောင် ငါမေးတာ ကြားလား”
”အေး ကြားပါတယ်ကွ။ ငါ စဉ်းစားနေလို့ပါ။ ဒီလို ကိုမင်း…ငါဒီမှာ ရာထူးတက်တယ်။ မနေ့က ပဲ”
”ဟင်…ရာထူးတိုးတယ် ပြောတဲ့ မင်းအသံကြီးကလည်း အသက်မပါ လိုက်တာ”
”သြော် …မင်းကလည်း ကွာ …ငါ့အကြောင်းကို မင်းမသိတာမှ မဟုတ်တာ။ ငါရာထူးတိုး လို့ ပျော်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မင်း သိနေတာပဲ”
”ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လေ ကွာ။ ဒါပေမဲ့…။ ဟေ့ကောင် မင်းရဲ့နောက်က အသံတွေ ဆူညံ နေတာပဲ။ ဘာလဲ ဟိုဘင်္ဂလားတွေ ပဲလား”
”မဟုတ်ဘူး ဟေ့ကောင်ရေ။ ဒီတစ်ခါ အိန္ဒိယတွေ။ မင်းကို ငါ ပြောဖူးတယ် မို့လား။ ငါတို့ အခန်း မှာ ငါရယ် ထက်အောင်ရယ် အပါအဝင် နိုင်ငံခြားသား ၆ ယောက်နဲ့ စုစုပေါင်း ၈ ယောက် နေတယ်ဆိုတာ။ အေးအခု အဲ့ဒီ ရှစ်ယောက် ထဲက အိန္ဒိယ နှစ်ယောက်က လိုင်းတစ်လိုင်းကွာ။ မင်းကို ငါပြောဖူးတဲ့ ဒီစင်ကာပူက ဂေလန်း ဆိုတဲ့ နေရာ ကို မင်းသိတယ်မလား။ အေး… ဒီနေ့ အလုပ်ပိတ်ရက် ဆိုတော့ အိန္ဒိယ နှစ်ယောက်က ဂေလန်း သွားတယ်။ ပြန်လာတော့ သူတို့အတွေ့အကြုံကို ကျန်တဲ့ကောင် တွေက ဝိုင်းပြီး စပ်စုနေတာ”
”သြော်..သဘောပေါက်ပြီ။ မင်းတော့ သူတို့လို ဂေလန်းတော့ မသွားပါနဲ့ သူငယ်ချင်းရာ… ဒါ ဆို မင်းပြောတဲ့ စင်ကာပူ ရောက်လာကြသူတွေရဲ့ ‘ပျင်း၊ ပျော်၊ ပျက်၊ ပြေး’ စာရင်းမှာ သူတို့က ပျော်နေကြတဲ့ အဆင့်ပေါ့ ဟုတ်လား”
”အေးပေါ့၊ ဒီကောင်တွေက ပျော်တဲ့ အဆင့်ကို ဖြတ်တာ အရမ်း ကြာတာကွ။ ထားလိုက်ပါကွာ။ ငါတို့ပြောနေတာ ဘယ်ရောက်ပြီလဲ။ သြော်…ငါရာထူး တက်တဲ့ကိစ္စ”
”အေးလေ..ငါတို့ မြန်မာပြည်မှာတုန်းက Auto CAD တက်ပြီး အွန်လိုင်း စာမေးပွဲဖြေတော့ ငါလည်းမင်းလို မအောင်ခဲ့ရင် ကောင်းမှာပဲလို့ တစ်ခါတလေမှာ တွေးမိ တယ်”
”မင်းစဉ်းစား ကြည့်လေ။ ငါက Auto CAD အောင်တော့ ဒီကိုရောက်တယ်။ ဒီကိုရောက်တော့ အလုပ်တွေ တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် တိုးလုပ်ရင်း ငါမြန်မာပြည်ကို အလည်လာဖို့တောင် ခွင့်ရက်က ဘယ်မှာရလို့လဲ”
”ဒါကတော့ကွာ…ငါ ပြောနေကျ အတိုင်းပဲ ပြောရရင် မင်း စွန့်စားရတဲ့ အချိန် နဲ့ အခြေအနေကို ငွေကြေးနဲ့ တိုက်ရိုက် အချိုးချလေ။ အဲ့ဒီအခါ…”
”တော်ပြီ ကိုမင်းရေ…မင်း ဆက်ပြောမှာ ငါသိတယ်။ ငါတို့ မြန်မာတွေကွာ၊ စင်ကာပူ ကို လာတာငွေကြေး လာရှာဖို့ သက်သက် တစ်ခုတည်းလား။ အဲ့ဒါ ငါ့ကိုယ်ငါ မေးလို့ မရလို့ မြန်မာပြည်က မင်း ကို မေးကြည့်တာ မင်းဖြေ”
”ဒါကတော့ကွာ…ဘယ်အရာမဆို စွန့်လွှတ်ရမှု တစ်ခုအတွက် တူတန်မျှတဲ့ လျော်ကြေး ဆိုတာ ရှိတာပဲ။ မင်းအဲ့ဒါကို သဘောမပေါက် လို့ပါ”
”ဒီက လူတွေကို ငါကြည့်တယ်ကွာ။ ငွေက ကိုယ့် ပြန်လိုက်ဖို့ ကြိုးစားနေကြရင်း၊ တော်တော် များများကတော့ ငွေနောက်ကို ဝရုန်းသုန်းကား လိုက်နေကြတုန်းပဲ”
”အဲ့ဒါ ဘဝပဲ ထွန်းကြီးရဲ့”
”အဲ့ဒါဘဝ ဆိုရင်…အဲ့ဒီ ဘဝကို ငါမလိုချင်ဘူးကွာ။ ငါ မနေ့က ရာထူးတက်တယ်။ အဲ့ဒီရာထူး အတွက် ငါရုန်းရဦးမယ်။ ရာထူး ဆိုတာ ငါ့အတွက်တော့ ပခုံးပေါ်တင် ပေးလိုက်တဲ့ ထမ်းပိုး တစ်ချောင်းနဲ့ တူနေမလားပဲ”
”မင်းထမ်းထားတဲ့ ထမ်းပိုးပေါ် မှာ ပိုက်ဆံတွေ ရှိနေတယ်လေ”
”လာပြန်ပြီ ဒီပိုက်ဆံ…. ငါတို့ ဒီ ပိုက်ဆံနောက်ကို ဘယ်အချိန်ထိ လိုက်နေကြ ရဦးမှာလဲ။ ဒီကိုရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေ ပို တော်လာ လေလေ ငါဝမ်းနည်း လေလေပဲ။ ငါတို့က သူတို့ဆီက တစ်စုံတစ်ခု မျှော်လင့်ချက်အတွက် ငါတို့ဘက်က ပေးဆပ်လိုက် ရတဲ့ပညာတွေက နည်းနည်းနောနောမှ မဟုတ်တာ။ အဲ့ဒီ ပညာတွေရဲ့ အသီး အပွင့်တွေကို ပြန်မြင်ရင် ငါပိုပြီး ဝမ်းနည်းတယ်။ ငါအခု ရပ်နေတဲ့ မြေဟာ ငါတို့မြေ မဟုတ်ဘူး”
”မင်းပဲ စောစောက ပြောတယ်လေ..ငါတို့ ဒီက သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ ကာရိုက်တာ နဲ့ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေအကြောင်း ဒါကလည်း တစ်စုံတစ်ခု အတွက် ရင်းနှီးနေတာပဲ မဟုတ်လား”
”ငါအများကြီး မပြောတော့ဘူးကွာ..ခြုံပြီး ပြောရရင် မင်းတို့က တန်ပါတယ်”
”တန်ခြင်း၊ မတန်ခြင်းဆိုတာ ကိုမင်းက ဘယ်ပေတံနဲ့ တိုင်းနေပြန်တာလဲ စင်ကာပူသားရယ်။ လူ့ ဘဝကို ရောက်လာပြီးမှတော့ တန်တာ၊ မတန်တာတွေ အသာထား။ ရောက်တဲ့ နေရာ၊ ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာ နေပျော်ဖို့၊ နေသားကျဖို့က ပိုအရေးကြီး မနေဘူးလား”
”ထားလိုက်ပါတော့ ..ငါအခု ဖုန်းပြောရင်း ငါတို့နေတဲ့ အဆောက်အအုံရဲ့ ငါးလွှာကို ရောက်နေတယ်။ ငါနေတာက စင်ကာပူနိုင်ငံ ရဲ့ ချန်ဂီလေဆိပ်နား မှာဆိုတော့ လေယာဉ်သံ တွေကိုလည်း ဖုန်းထဲမှာ မင်းကြားနေ ရမှာပဲ။ ငါအခု ချန်ဂီကနေ မျက်နှာမူထားတဲ့ နေရာ က အနောက်မြောက် ယွန်းယွန်းဆိုတော့ ငါတို့ မြန်မာပြည် ရှိတဲ့ နေရာပေါ့။ ငါတို့ မြန်မာပြည်ဘက်ကို ဦးတည် ပျံသန်းဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ လေယာဉ်တွေကိုလည်း ငါမြင်ယောင်နေတယ်။ အဲ့ဒီ လေယာဉ်တွေရဲ့ ပြေးလမ်း အဆုံးမှာ ငါတို့ မြန်မာနိုင်ငံ ရှိတယ်”
”မင်းပြောတာကို ငါနားထောင်နေတယ် သူငယ်ချင်း”
”အေး….အဲ့ဒီမှာ ငါ လက်ထပ်မယ့် ငါ့ချစ်သူ ရှိတယ်။ ငါ့ မိသားစုရှိတယ်။ ငါ့ရဲ့ အိမ်ရှိတယ်။ ငါကြားဖူးတာ တစ်ခုရှိတယ်။ အိမ်ဆိုတာ အဆောက်အအုံ မဟုတ်၊ အသိုက်အမြုံ တစ်ခုသာလျှင် ဖြစ်တယ်တဲ့။ မင်းတို့ နေထိုင်ရာက အသိုက်အမြုံ၊ ငါအခုနေတဲ့ ချန်ဂီ လေဆိပ်နားက ကွန်းခိုရာက အဆောက်အအုံ၊ အသုံးအနှုန်းရော၊ အဓိပ္ပာယ်ရော အများကြီး ကွာတယ် သူငယ်ချင်း”
”မင်းရဲ့ ခံစားချက်ကို ငါနားလည်ပါတယ်။ မင်းပြောသလို အဆောက်အအုံ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အသိုက်အမြုံ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိုးကောင်းကင်ကြီး တစ်ခုတည်းရဲ့ အောက်မှာ ရှိနေကြ တဲ့ အရာအားလုံး သူ့ရနံ့နဲ့ သူ မွှေးပျံ့ နေစေဖို့ နွေးထွေးမှုတစ်ခု မဖြစ်မနေ လိုတယ်။ အဲ့ဒီ နွေးထွေးမှု ဆိုတာကိုသာ မင်းနားလည် သဘောပေါက်မယ် ဆိုရင် နီးခြင်း ဝေးခြင်း ဆိုတာဟာ ထည့် စဉ်းစားစရာ မလိုတော့ဘူးဆိုတာ မင်း သိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပဲ သူငယ်ချင်း။ လိုင်းတွေ မကောင်းလို့ ငါဖုန်းချ လိုက်တော့မယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ဆီးယူသယ် နိတ်စ်တိုင်းပေါ့ သူငယ်ချင်း”